Maal Haabaasuuf Dhama Raas|OROMSIIS ONLINE
Maal Haabaasuuf Dhama Raas
Waan nama gadisiisu guddaan tokko yaroo bara baraan guddachuu dhabnu dha. Bara kana keessa yaroo uummatni diina wajjin kokee wal qabee xinnaa fi guddaan Bahaa amma Dhihaa, Kaaba amma Kibbaa dhiiga isaa lolaasaa jiru akkuma bara darbanii arrabaa fi abaarsa hojii keenyaa duraa godhachuun kan nama gadisiisu caalaa kan nama gaafachiisuu tahuu qabu. Gaaraa garumaan namootas tahee ijaarsota maqaa Oromoo mogaafatanii socho’aa jirra jedhan jidduu jiru amma diina wajjin hiriiroo hin galeetti kan lamaffaa fi kannagaa hiikamuu danda’u dha.
Qabsoon uummata Oromoo yoom iyyuu caalaa har’a bakka tokkotti itituu qaba. Kana jechuun ijaarsonni kun halkan tokkotti tokko tahanii buluu qabu jechuu miti. Waan akka tokko hin taanee isaan godhe waan jiruuf amma sana furatan yaroo fudhachuun hammeenya hin qabu. Waan baayyee nama dhibuu fi guddachuu dadhabne nama jechisiisu, ijaarsan qaba jedhanii waa’ee kaayyoo ijaarsa ofii injifannoo ijaarsi isaanii qabsoo uummata Oromoof galmeesse himachuu irraa waan ijaarsi biraa hojjechuu dadhabe, waan ijaarsi biraa balleesse odeessaa ooluun tooftaa qabsoo isa duraa taheeargamuu isaa ti. Kanaaf immoo itti gaafatama duraa warri qaban warra ijaarsa qabna jedhan yoo tahu. Warri isaan dhageenuus isaani irraa adda bahuu hin deenyu. Yaroo isaan ijaarsa biraa geeraruu qaban , kan ijaarsa kee qofaa nuuf himii achi irraa bu’ii jechuu qabna. Isa bareedaa hojjeeteef isa faarsinee isa hojjechuu dhadbabeef isa jajjabeesinee nagaa itti dhaamna.
Ijaarsa tokko abaaruu fi arabsuu irra darbamee miseensa ijaarsotaa maqaa xurreessuuf yaaluun haalan fokkisaa tahuu isaa caala bu’aa tokko illee nu fiduu akka hin dandeenyee hubannee itti dadhuu haa dhiifnu. Warri ololaa fi arbaan duwwaa ijaarsa tahan bara dheeraaf argaa jira.” Maal Haabaasuuf Dhama Raasuu”, jedha Oromoon . Dhama debisanii dedeebisanii yoo raasan kan keessaa bahu hin jiru. Warra kana wajjin wal qixxaachuuf jecha qabsaawwan tahanii warri nama abaaranii fi arabsan dhaabbuu qabu. Inni duraa hojii bifa Kanaan deemu irrtti warri bobaanee jirru gochi kun ijaarsaaf bu’aa tokko illee fidaa akka hin jirre bareechinee hubachuu qabna. Inni lammaffaa warri ‘Social media’ adda addaa irratti maqaa sobaan haala fokkisaa kana oofaa jirru sammuu of xurreessuu fi hojii gadadoo kana irraa dhaabbachuu qabna. Yoo nuyi waan nagaa hojjenne, waan nagaa yaadnee fi dhugaaf dhaabbanne namoota keenya warra walaallumaadhaan meeshaa namaa tahaa jiraniif fakkeenya gaarii tahuu dandeenya.
Namni lamaa fi sadiin ijaarsan qabna jedhanii yoo waakatan rakkina keenya tahuu hin qabu. Waan barbaadan himachuuf haqaa fi mirga isaanii dhowwachuu nu irraa hin eegamu. Kaayyoo fi akeeka dhaabbatniif himatanii gargaarsaa fi miseena horachuuf hojii guddaan isaan eegachaa jira. Kaayyoo bilisummaa fi akeeka humna qabsoo bilisummaa uummata Oromoo itichuu qabatanii yoo nutti hin dhufne wajjin dhaabbachuu dhiifna malee abbaaruu fi arbsuu hin qabnu. Warri farra akeeka qabsoo bilisummaa qabatee uummata Oromoo keessa socho’uuf abbaltii qabu dura dhaabbachuu qofaa utuu hin taane dhabamsiisuu qabna. Akkaataan itti dhabbamsiisuu dandeenyuu daandii kaayyoo bilisummaa qabannee naamusaa jabaaf murannoo guutuun yoo waraaqne qofa taha.
Qabsoon bilisummaa uummata Oromoo waan diaspora keessatti akka marqaa wal maraa jiruuf sababni guddaan wal caaluu dadhabne. Arabaa fi abaarsa karaa tokkoon nutti dhufu abaarsaa fi arbaan of irraa qolachuuf waggaa dheeraa yaalle. Bu’aan irraa argame hin jiraatiin malee barumsa gahaa argannee jirra. Tooftaan kun hunda keeny walitti qabee nu xiqqeesse malee waan nu gargaare hin qabu. Yaroof yoo nama nu abaaree fi arabse nuyis deebiifnee isuma isaan jedhan yoo jenne halkan sana rafnee bula taha. Gama qabsoo bilisumma yoo ilaalle garuu waan gumaachifne hin qabu. Hundi keeny waliin dhoqee keessa gangalachaa waggaa baayyee dabrsinee jirra. Ammaan kana galatni Qeerroo Bilisummaa Oromoof haa tahu malee nu gahee jira. Diiga isaaniin uummatni keenya guca bilisummaa fuula isaa duratti akka qorsa ganamaa balaqisaa jiru akka dowwatu godhaniiru.
Bilisummaan kan dhufuu danda’u qabsoo haqaaf dhugaan hiriiroo duratti darbanii hojjechuudhaan dhiiga of dhangalaasuudhaan malee ololaa fi soba afarsuudhaan miti. Kana booda maqaa wal xurreessuun dhaabbachuu malee filmaata biraa hin qabu. Warri amma illee tooftaa butute kana qabatee uummta Oromoo keessa seenuuf yaadu bakka tokko illee hin gahan. Yoo har’as dhoqee dhiisan udaan ( dhiifama saglee kanaaf)isaanii qabsawwaan Oromoo qabsoo kanaaf of wareegama hadhaa kennaa jiran dibuu yaadan ittisa dhaquunu hin qabnu. Waan yaadan jedhaniis, hojjetaaniis haa ilaalan.
Yoo nutti warri qabsoo bilisummaa uummata Oromoof dammaqisan dhaabbanne jennu tufannee isaan dhiifnu , waan dhageettii dhabaniif isanis dhiisuuf dirqamu. Harka tokko qofaa walitti rukkutuun hin danda,u. Waan qabsoo Oromoo ala keessatti wal xaxxee fi wal maree jiruu hunduu gahaa keenya qabna. Yoo nut wal atakarruu fi wal dura dhaabbachuu hojii qabsoo keenyaa keessa isa duraa gonee fudhanu eenyu akka jidduu keenya uluuqee galaa jiruu hubachuun nama keenyaaf salphaa tahee hin argamu. Garuu hojiin diina sadarkaa guddaatti akka deemsiisaa jiru mamuu hin qabnu. Namoonni keenya basaasa diina nama Tigree duwwa akka tahetti warri fudhatan jiru. Basaasni TPLF Oromoo keessatti hojjetu nama Oromoo tahe yookan nama afaan Oromoo akka keenya dubbachuu danda’uuf , waa’ee bilisummaa Oromoo kan dhimmu fakkaatee nama Oromoota keessa seenuuf dandeetti qabu qofa.
Hojii keenyaan duwwaa utuu hin taane namummaanis wal calaluu qabna. Waliin shagooyyee fi iyaasee sirbuun qofaa gahaa miti. Bakka oolumsaa fi hojii walii adda baafnee beekuun barbaachisaa dha. Waan hojjennuu fi waan jennuu yoo wal hin fakkaannee maaliif akka tahe beekuu qabna. Sababni isaa ijoolle Oromoo baayyee qaqqalii tahanitu dhumaa jira. Unummata keenyatu halkanii fi guyyaa tumaa, samamaa, hidhmaa fi ajjeessamaa jira. Yaroon haala uummtni oromoo keessa jiru akka laayyootti ilaallu bira dabarree jira.
Akka ilaalcha koo yoo tahe, yaroo kana keessa namni ani dhala Oromootti ofiin jedhu wali irratti olola dhiisee qabeenya , beekumsa dandeetii fi humna qabuun Qeerroo Bilisumma Oromoo wajjin dhaabbatee qabsoo Xummura Garbummaa bakkan gahuu yookan afaan qabatee taa’uu dha . Karaan jiddu galeessaa takkaa hin jiru
Sagalee Bilisummaa Oromo (SBO) Gur 24, 2017
Simannaa Qeerroon Sabbontoota Oromoo Mana Hidhaa Wayyaanee Irraa Bahaniif Taasifame
Hiriiraa Arsii Nagallee fi Ajjechaa Godinaalee Oromiyaa Adda Addaa Keessaa
Bakka Har’aa Kana Ga’uuf Karaan Deemame Dheeraa Dha